Al-Shabaab oo soo saaray hab cusub oo uu shacabka ku boobo
Kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab waxaa mar kasto caado u ah inay iska boobaan hantida shacabka Soomaaliyeed iyagoo ku gabbanaya diinta Islaamka. Wararka hada laga helayo Gobalka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-Shabaab ay haatan la yimaadeen dhaqankii ugu xumahaa oo ay ku boobayaan dadka danta yar ee shacabka ah.
Dadka deegaanka waxay sheegeen in ururka al-Shabaab uu ku amray in qabiil qabiil ay dadka isku qaybiyaan kaddibna ay qabiil ahaan u keenaan hantida ay leeyihiin. Waxay intaasi raaciyeen in qabiil kasto la ballaminayo maalin gaar ah si dabeetana looga qaado xoolohooda ama haddii ay beeraley yihiin looga qaado dalagyadii u soo baxay oo ay u siiyaan ururka arxan daran ee al-Shabaab.
Culeyska ugu daran ayaa haatan wuxuu saaranyahay, ganacsatada beeralayda iyo xoola dhaqatada ku nool qaar ka mid ah deegaanada Gobalka Jubbada Dhexe. Sidoo kale, dadka beeralayda ah ee ku nool deegaanada miyiga ah ee degmada Jilib ayaa ka cabanaya qafaal maleeshiyaadka al-Shabaab ay u gaysanayaan caruurtooda si ay u dagaal galiyaan iyo boob ay ku haayaan dalagyada ay beertaan. Dhaqanka lagu yaqaano al-Shabaab ee isugu jira laynta muslimiinta, boobka, iyo xarigga dadka shacabka ah ayaa ah kuwo dhammaantood ka fog dhaqanka suuban ee Islaamka.